Xiisad weli ka taagan degmada Balanbal ee Gobolka Galgaduud. | POHSOMEV.COM
Xiisad weli ka taagan degmada Balanbal ee Gobolka Galgaduud.
posted by admin on Wed, 06/11/2014 - 14:53
Balanbal (Sh M Network)—Wararka laga helayo degmada Balanbal ee Gobolka Galgaduud ayaa ku soo warramaya in xiisad dagaal iyo dhaq dhaqaaq Ciidan aad u culus uu ka jiro deegaanno hoostaga degmadaasi.
Xiisadaan oo u dhexeysa Labo Maleeshiyood oo deegaanka wada daga islamarkaana shalay ku dagaalamay halkaasi ayaa Maamulka degmada Balanbal sheegay in ay wadaan dadaalo ay ku qaboojinayaan xiisadahaasi.
Dhinacyada dirirtu dhexmartay oo weli Hubkoodii heysta ayaa isku horfadhiya halkii shalay ay dirirtu ku dhexmartay kuwaas oo ah dad xoolo dhaqato waxaana lagu soo warramayaa in deegaanka ay soo buux dhaafiyeen Ciidamo Ethiopian ah iyo kuwo Liyu Police ah oo ku soo baxay xiisaddaasi.
Ugu dambeyn Hareeri Xasan Barre oo ah Guddoomiyaha Degmada Balanbal ee Gobolka Galgaduud oo saaka u warramay Idaacadda Shabelle ee Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay wadaan qorsho ay ku hakinayaan dhiilo colaadeedyada ka soo cusboonaaday deegaanada hoosyimaada Degmada Balanbal ee Gobolka Galgaduud.
TVga Horn Cable oo dagaal ka dhan ah beelaha...
C/WELI oo Ethiopia ka dalbaday arrin uu og ya...
Beesha Habar-Gidir oo diiday qorshe uu KAY ka...